Fitsidihana ara–pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona nataon’ny solotena maharitra vaovao eo anivon’ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung – Sénat de Madagascar
Fitsidihana ara–pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona nataon’ny solotena maharitra vaovao eo anivon’ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung
March 6, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Nitsidika ara-pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO ny solotena maharitry ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) vaovao eto Madagasikara Andriamatoa Constantin GRUND ny talata 12 febroary 2019..
Andriamatoa Marcus SHNEIDER no solotena maharitra niasa teto Madagasikara teo aloha izay nodimbiasan’Andriamatoa Constantin GRUND.
Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) sy ny Antenimierandoholona amin’ny alalan’ny fanomezana tan-tsoroka sy fampitaovana ity Andrimpanjakana mpanao lalàna ity ny votoatin’ny fihaonana.
Hitondra fandaharan’asa vaovao ho fanatevenana ny efa nisy teo amin’ny roa tonta manomboka izao ny FES hoy Andriamatoa Constantin GRUND.
Tetik’asa maro no tanterahina amin’izany ka hatomboka amin’ny fanofanana sy fanamafisana traik’efa ny Parlemantera sy ny mpiasa tamin’ny FES hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO. Anisan’izany hoy ihany izy ny eo anivon’ity Andrimpanjakana ity, fanamafisana ny lafiny ara-demokratika, ny fampahafantarana ny fizaram-pahefana misy eto Madagasikara izay ahitana ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna.
Andraikitry ny Parlemantera ny mampahafantatra sy manamparitaka any amin’ny Faritra sy ny Vahoaka ny momba ny Antenimierandoholona sy ny andraikiny, ny fondation Friedrich Ebert Stiftung hoy ihany izy dia mampiofana ireo Parlemantera amin’io sehatra io amin’ny alalan’ny fanaovana varavarana misokatra momba ny Antenimierandoholona. Mamatsy ara-pitaovana ny Antenimiera ihany koa izy ireo ho fanatsarana ny lafiny serasera hanatomombanana tsara ny fampihodinana ny lafin’ny raharaham-panjakana.